Sideen ku ogaadaa haddii aan si dhab ah wax u ogaado? - Mytika Speak
Bogga ugu weyn / Dareen, Furayaal iyo Muujin / Sideen ku ogaadaa haddii aan si dhab ah wax u ogaado?
bilood ka hor 7
Way dhacdaa. Wax kasta oo nolosha ku dhaca, gudaha waad ku ogayd inay dhici doonaan.
Sidee ku ogaatay in 2 + 2 = 4? Maxay dareemeysaa inay ogaato taas? Waxay u egtahay inaanay waxba ahayn maxaa yeelay markaad wax garaneyso, uma baahnid inaad wax la halganto. Looma baahna wadahadal hoose oo ku saabsan mowduuca. Haddii aad weydiinaysid su'aal ku saabsan, markaa adigu waxba kama hubtid.
Waxaan si joogto ah u gudbineynaa waxa dhici doona koonkan oo ku saleysan waxa aan ognahay inay dhici doonaan. Adduunku wuxuu markaa noogu soo bandhigayaa qaab muuqaal ah oo aan ugu magac darnay nolosha. Markaad su'aal weydiiso inay wax dhici doonaan, waxaad soo bandhigaysaa suurtagalnimada taas oo laga yaabo ama laga yaabo inay ku shaqeyso waxtarkaaga iyadoo kuxiran waxa aad ogtahay in qallafku jiro
Noloshu waa fududahay.
hubaal ma weydiinayso su'aalo
jawaabaha ayaa laga yaabaa in aan la sheegin
talo soo jeedinta hore
ujeeddooyinka marin habaabinta ka baxsan
helitaanka casharo aad loogu baahnaa
si aad u qabsatid jihooyinka saxda ah
Tagsmiyirka koritaanka shakhsi ahaaneed gabayo casharo ruuxi ah ruux ahaaneed
Sideen ugu jihaystaa dhanka Cirka?
Sideen u sameeyaa guddi aragti wax ku ool ah?
Waa maxay dhawaqa sare ee aan sii maqlayo?
Sideen ugu noolaan karaa xilligan xaadirka ah?
Waa maxay riyadu?
Laura Hitt wuxuu leeyahay,
May 1, 2021 at 3: 40 pm
Qoraal wanaagsan! Ku soo koobay fikrado qoto dheer gabaygaaga! Waxaan dooran karaa hubaal waxyaabaha qaarkood waana ogahay inay dhacayaan. Mahadsanid!
May 1, 2021 at 3: 44 pm
Farxad ayey kugu noqotay Laura! Waad ku mahadsantahay ereyadaada wanaagsan. 🙏🏽
Sabik Xasan wuxuu leeyahay,
May 14, 2021 at 2: 54 pm
Runtii dhiirrigelin! Hambalyo wanaagsan!
May 14, 2021 at 2: 55 pm
Mahadsanid Sabik, Waan ku faraxsanahay inaad ka heshay! ❤️
jimmy fripp wuxuu leeyahay,
June 29, 2021 at 8: am 09
runtii waan jeclahay maqaalkan, mahadsanid
June 29, 2021 at 10: am 10
Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan maqlo taas Jimmy, mahadsanid! ❤️
Copyright © 2021 Mytika Speak. Dhammaan xuquuq dhowran. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo Shuruudaha Isticmaalka